सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या बढ्यो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या बढ्यो
January 19, Sun
सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या बढ्यो
साउन २ गते, २०७६ - १०:४५
प्रदेश, प्रदेश न. ४, मुख्य समाचार
कास्की । कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी ८८१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तिनमा २० प्रतिशत पुरुषले दिएका मुद्दा छन् । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ संहिताले पुरुषले चाहेमा पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरेपछि सम्बन्ध विच्छेदका निवदेन लिएर पुरुष अदालत पुग्न थालेका हुन् ।
जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद गर्न दिइएका मुद्दामध्ये पुरुषले दायर गरेका मुद्दा करीब २० प्रतिशत रहेका जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । अदालतमा आउने मुद्दामा सबैभन्दा बढी फैसला नै सम्बन्धविच्छेद हुने गरेका उनको भनाइ छ । उनले भने, “मुद्दा परेकामध्ये ६४७ मुद्दा किनारा लगाइसकेका छौं ।”
आव २०७४/७५ देखि आएका एक हजार ३३८ सहित २०७५र७६ मा अदालतमा दुई हजार ५८९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीन हजार ४९७ मुद्दा प्रक्रियामै रहेको न्यायाधीश अधिकारीले जानकारी दिए। यसवर्ष मात्रै दुई हजार ५६३ मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य अदालतले राखेको थियो । मुद्दाको छिनोफानोसँगै अदालतले विशेष प्रकृतिका निवेदन उपरसमेत सम्पादन गरेको छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनसँगै मानाचामल सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्न छाडेका छन् । अंशसँग जोडिएर आएमा मात्रै मानाचामल मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छ । सामान्य विवादका घटना स्थानीय तहमै मिल्ने वातावरण बन्दै गएमा आगामी दिनमा अदालतमा दर्ता हुनसक्ने मुद्दा केही कमी आउने श्रेष्तेदार लोकनाथ पराजुलीले बताए ।
साउन २ गते, २०७६ - १०:४५ मा प्रकाशित
सामुदायिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल
गौशाला । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्न...
नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि मात्र एमसिसी सम्झौता भएको थियो : अध्यक्ष थापा
हेटौँडा । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले अमेरिकन सरकारसँग तत्कालीन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका...
साताको शेयर बजार : साढे छ अर्ब माथिको कारोवार, लगानीकर्तामा विश्वास बढ्दै
काठमाडौं । गत साता धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचकले उकालो यात्रा तय गर्दै नयाँ इतिहास...
दुई आयोगको पदाधिकारीको नाम सिफारिस, अध्यक्षमा भट्ट र सुवेदी
काठमाडौँ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका...
अमेरिकामा गोली चल्यो, चार जनाको मृत्यु
लस एन्जेलस । अमेरिकामा भएको गोलीकाण्डमा परी कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको छ । उताह राज्यमा शुक्रबार...
बाक्लो कुहिरोको कारण २५ वटा कार दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु, १० घाइते
रुस । रुसमा शुक्रबार एकसाथ २५ ओटा कार दुर्घटनामा परेका छन् । दुर्घटनामा परी कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु...
भलिबल क्लब च्याम्पियनसिप : एपिएफ र आर्मी विजयी
काठमाडौं । पाँचौ संकरणको आरबीबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसीपको महिलातर्फ...
विद्रोहको झण्डा बोक्न आवश्यक छैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल
परासी । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नेपाली समाजमा अब विद्रोहको झण्डा बोक्न आवश्यक नभएको बताएका छन्...
आस्था राउतलाई दिपकराज गिरीकाे पत्र – गल्ति तिम्रो फेसबुक लाइभले गर्यो !
काठमाडौ‌। बरिष्ठ कलाकार दिपकराज गिरीले गायिका आस्था राउतलाई फेसबुकमा गरेको लाइभको कारण गल्ती देखिएको...
राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनालीसँगको अन्तर्वार्ता : ‘राजस्व छल्ने साना ठूला कसैलाई छाडिन्न’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री...
नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी, सभामुखको नाम अनुमोदन हुने
नेकपा–राजपाको गठबन्धनलाई रिजवान अन्सारीको पार्टीले सघाउने
कलङ्कीबाट नक्कली नोटसहित दुई जना पक्राउ
फुटबल : एनआरटीद्वारा विभागीय टोली एपिएफ पराजित
एमसीसी नेपालका लागि महत्वपूर्ण : सभापति देउवा
हिमपातले रसुवा–केरुङ आवतजावत बन्द
सामुदायिक विद्यालयमा गरिबका छोराछोरी पढ्छन् भन्ने धारणा हटाउनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ
अब नेकपामा पूर्वसमूह भन्ने नै छैन : प्रवक्ता श्रेष्ठ
ल्होछारकाे अवसरमा तीन दिन सार्वजनिक विदा
आस्था राउतलाई पक्राउ पूर्जी जारी
हेटौँडा प्रदेश राजधानी हुँदा चितवनवासी खुशी
गुरुङ साहित्यिक मञ्चकाे स्थापना दिवसका अवसरमा कविता प्रतियोगिता
भक्तपुरमा वर्षाले नौ करोडकाे इँटा नष्ट
सभामुखमा अग्नि सापकोटा प्रस्तावित
आस्था राउत विरुद्ध मुद्दा दर्ता, पक्राउको तयारी